Nibodo tany Espaina
Hatsarana sy fahasalamana
Ny fahasalaman'ny vehivavy
Fanaraha-maso ny vehivavy
Cuisines of this world
Ankizy ary mikarakara azy
Ny fahasalaman'ny zaza
Mivezivezy manodidina ny kintana
Encyclopedia of Stars
Ario ny lanjan'ny fitsipika
Psychology and Relationships
Fantaro ny tenanao
Mamantatra ny hoavy
Plots and Rites
Emirà Arabo Mitambatra
Aostralia sy Oseania
Amin'ny firesahana, Espaina dia tsy mitovy amin'ireo firenena toa an'i Tiorkia na Ejipta, izay matetika dia ny ampahany amin'ny serivisy dia mifanaraka amin'ny habetsahan'ny torohevitra. Saingy ny fanontaniana hoe: "Manome an'i Espaina ve ny tendrony?" Mbola valin'izany ny valiny, satria ny tendro dia famantarana marim-pototra sy fankasitrahana ny asan'ny mpiasa. Izany hoe, tsy misy olona manery anao hipetrapetraka, fa raha manana sakafo matsiro mahavelona sy mpandroso sakafo tsara ny trano fisakafoanana, nahoana no tsy misaotra azy noho ny asa tsara? Ny fananana fotsiny dia hampiseho ny fomba tsara sy ny fanajanao ny asan'ny hafa.
Andeha isika hijery akaiky ny halehiben'ny fanapahana ny tendron'i Espana sy ny fomba hanaovana azy io.
Noho izany, ny toro-hevitra ao Espaina amin'ny hotely dia tsy mila havaozina ao anaty efitrano ao anaty takelaka na hametraka ny pasipaoro rehefa misoratra anarana, satria voaràra ny mpiasa tsy handray vola avy ao amin'ny efitrano. Izany hoe, raha te hisaotra ny mpanadio amin'ny fahadiovana ao amin'ny efitranonao ianao, dia omeo vola ny olona. Any Espaina, tsy manapa-kevitra ianao fa ho tsara kokoa ny efitranonao, saingy amin'ny fankasitrahanao ny fanadiovana tsara, ny haavom-bidy sy tsy misy toro-hevitra dia ambony. Mazava ho azy fa tsy mampalahelo ny manome tondro kely ho an'ny mpiandry varavarana sy ny mpiasa hafa izay hahafeno ny asany.
Toy izany koa ny tendron'i Espaina amin'ny trano fisakafoanana, cafés ary barres. Amin'ny fanomezana vola, ny fanovàna izay lazainao ho toy ny tendrontany, lazao amin'ny mpitsabo izany. Aza avela miangona mangina eo ambony latabatra fotsiny ihany koa ny tendron-tseranana, satria izy ireo dia hihazakazaka aorian'izay handoavana ny vola izay hadinonao.
Tsy dia lehibe loatra ny haben'ny tendron'i Espana. Azonao atao ny mandoko amin'ny 0,5 euro, ary ny dingana lehibe indrindra, mazava ho azy, dia voafetra ihany ny habetsaky ny fahalalahan-tanana sy ny kitapo.
Ny fanilihana dia tsy misy na oviana na oviana, ary tsy misy olona manery azy, fa ny olona izay miasa ho anao dia faly mahafantatra fa mahasalama anao ny asany, koa aza misafototra toro-hevitra kely - ao amin'ny teti-bola dia tsy hisy fiantraikany be loatra izany, ary ho faly ny mpiasa.
Savona - toetoetran'ny mpizahatany
Kitapo fikarakarana fitsangatsanganana
Fiantohana ny fitsangatsanganana any ivelany
Savonlinna - toetrandro
Fomba 10 hivezivezy malalaka
Loharano mafana any Hongria
Visa ho any Indonezia ho an'ny Rosiana
Toeram-pisakafoanana tsy mahazatra any Moscow
Ny Fiovan'ny Fiangonana any Lyubertsy
Ny tanàna lehibe indrindra eran'izao tontolo izao
Aiza no handehanana amin'ny Martsa?
Arginine - toetra
Agadir - tora-pasika
Nahoana no manonofy ny tolotra?
Akanjo mainty amin'ny andro fahatarana
Inona no tokony hatao amin'ny fampakaram-bady amin'ny fahavaratra?
Ny fiterahana taorian'ny postinor
Beans amin'ny teny Koreana
Sary nalain'ny gallbladder
Aretina amin'ny rafi-pitabatabana
Sotro amin'ny sotro curry
Salady miaraka amin'ny tavoahangy - ny fomba tsara indrindra ho an'ny sakafo mahavelona
Voan'ny aretim-pahaizana voalamina amin'ny vohoka
Fashionable outerwear 2014
Mena mena miaraka amin'ny miverina
Ny dite ao amin'ny ranomanitra - tsara sy ratsy
Toro-tongotra eo amin'ny lakozia miaraka amin'ny eyelets
Zavamaniry mavokely ho an'ny mpangataka
Biliary colic - soritr'aretina
Iza amin'ireo menaka trondro no tsara kokoa?
Ahoana no hianaranao hamaky haingana?
© 2020 mg.unistica.com